Chimiro / keteni Wall Girazi Fekitori | China Facade / keteni Wall Girazi Vagadziri, Vatengesi
Isu takashanda mune yekugadzira girazi indasitiri kubva 2006
Tsigiro yeemail info@yongyuglass.com
LABER® U girazi repamoyo
Yakakwira kuita U mbiri girazi system
Yakaderera simbi U chimiro girazi simba chizvarwa system
Tinted / Frosted / Yakadzika-E U girazi remberi
Yakatarisana / Curtain madziro girazi
Jumbo / yakanyanyisa girazi rekuchengetedza
Dupont SGP yakaomeswa girazi
Girazi rekuchengetedza rakamonana
Wakapusa girazi & Laminated girazi
Yakadzika-E yakadzivirirwa girazi zvikamu
Kuchengetedza magirazi zvikamu
Shower yekuchengetedza girazi
Yakajeka / Yakadzika simbi yakanyorova girazi
Tinted / Frosted yakanyorova girazi
U Girazi Pamhepo
Main Zvigadzirwa uye Specification
Kuchengetedza Girazi Railings & Fenzi
Yakatarisana / Curtain Wall Girazi
Jumbo / Oversized Kudzivirira Girazi
Dupont Yakatenderwa SGP Laminated Girazi
Kunyanya isu takanaka pa:
1) Kuchengetedza U girazi girazi
2) Yakakombama yakanyorova girazi uye yakakomberedzwa laminated girazi;
3) Jumbo saizi yekuchengetedza girazi
4) Ndarira, grey grey, grey grey tinted girazi rakapfava
5) 12/15 / 19mm gobvu rakapfava girazi, rakajeka kana rakapusa-rakajeka
6) Yakakwira-yekuita PDLC / SPD girazi rakangwara
7) Dupont mvumo SGP yakavezwa girazi
Yakakomberedzwa Chengetedzo Girazi / Bent Kuchengetedza Girazi
Basic Info Kunyangwe yako Bent, Bent Laminated kana Bent Insulated Girazi ndeyeChengetedzo, Chengetedzo, Acoustics kana Thermal Performance, isu tinopa Zvemhando yepamusoro Zvigadzirwa & Vatengi Sevhisi. Girazi rakamonerwa / girazi rakadzikama. Inowanikwa mumasaizi mazhinji, maumbirwo, uye mavara maRadio kusvika pamadhigirii zana nemakumi masere, maredhiyo akawanda, min R800mm, kureba kwema arc 3660mm, kureba kwakawanda gumi nemamita gumi Akajeka, akapenya endarira, grey, girazi girini kana bhuruu. girazi / Bent laminated girazi Inowanikwa mune dzakasiyana siyana c ...
Basic Info Laminated girazi rinoumbwa se sangweji ye 2 machira kana yakawanda inoyerera girazi, pakati payo rakasungwa pamwe neyakaomarara uye thermoplastic polyvinyl butyral (PVB) interlayer pasi pekupisa uye kumanikidza uye dhonza mweya, uye wozoiisa kumusoro -Kudzvinyirira gaba remhepo rinotora mukana wekupisa kwakanyanya uye kumanikidza kwakanyanya kuti inyungudise mweya shoma wakasara muchipfeko. saizi: 3000mm × 1300mm Yakakombama laminated girazi Rakakombama yakanyorova lami ...
Basic Info Yongyu Girazi rinopindura zvinetswa zvevakugadzira vanhasi vanopa JUMBO / YAKADZIDZWA-SIZED monolithic yakatsamwa, yakavharidzirwa, girazi rakavharika (maviri & katatu akavezwa) uye yakadzika-e yakavharwa girazi kusvika pamamita gumi nemashanu (zvinoenderana nekuumbwa kwegirazi). Kunyangwe chako chaunoda chiri che projekiti yakatarwa, girazi rakagadziriswa kana girazi rakayangarara, tinopa kuendesa kwepasirese pamitengo inokwikwidza. Jumbo / Oversized chengetedzo girazi Rondedzero 1) Flat yakapfava girazi imwechete pani / Flat yakapfava yakaputirwa ...
Basic Info Iyo DuPont Sentry Glass Plus (SGP) inoumbwa neyakaomarara epurasitiki inopindirana inosanganiswa pakati pezvikamu zviviri zvegirazi rakatsamwa. Inotambanudzira mashandiro egirazi rakamisikidzwa kupfuura matekinoroji azvino sezvo interlayer inopa kashanu simba rekubvarura uye ka100 kuomarara kweiyo yakajairika PVB interlayer. Feature SGP (SentryGlas Plus) ndeye ion-polymer ye ethylene uye methyl acid ester. Iyo inopa zvimwe zvakanaka pakushandisa SGP sechinhu chinopinda mukati ...
Yakadzika-E Inodzivirirwa Girazi Units
Basic Info Yakadzika-emissivity girazi (kana yakaderera-E girazi, pfupi) inogona kuita kuti dzimba nezvivakwa zvive zvakanaka uye simba-rinoshanda. Microscopic kupfeka kwesimbi dzakakosha senge sirivheri yakaiswa pagirazi, iyo inoratidza kuratidza kupisa kwezuva. Panguva imwecheteyo, yakaderera-E girazi inobvumidza huwandu hwakakwana hwechiedza chechisikigo nepahwindo. Kana marita akawanda egirazi akaiswa mukati mekudzivirira magirazi mayuniti (IGUs), ichigadzira mukaha pakati pemapani, maGU anovhara zvivakwa nedzimba. Ad ...
Yekutanga Info Yakadzikama girazi nderimwe girazi rakachengeteka riri kuburitswa neyekupisa girazi rakadzika kusvika pakunyorovera. Zvino pamusoro payo inoumba kudzvinyirira uye nekukasira kutonhodza pasi zvakaenzana, nekudaro kushushikana kwekumanikidza kunogovera zvakare pagirazi pamusoro apo kusagadzikana kunetsekana kuripo pakati pepakati pegirazi. Iko kunetsekana kunetsekana kunokonzerwa nekunze kwekumanikidza kunoenderana neiyo yakasimba yekumanikidza kusagadzikana Nekuda kweizvozvo kuchengetedzwa kwekuita kwegirazi kuri kuwedzera ...
Yekutanga Info Yakagadzirwa-kune-kukwana girazi keteni madziro uye mafafitera Chii chaunoona iwe paunobuda uye wotarisa-tarisa? Zvivakwa zvepamusoro-soro! Ivo vakapararira kwese kwese, uye kune chimwe chinhu chinonakidza pamusoro pavo. Kuonekwa kwavo kunoshamisa kwakasimudzwa nemaketeni egirazi madziro ayo anowedzera kubata kwakakwenenzverwa kune kwavo kwazvino kutaridzika. Izvi ndizvo zvatiri, kuYongyu Girazi, tinoedza kugovera mune yega yega chidimbu chezvigadzirwa zvedu. Zvimwe Zvakanakira Magirazi edu egirazi uye machira emaketeni anouya munzvimbo dzakawanda ...
Chiono chedu kugovana zvakaenzanisirwa zvakanakira China yekuvaka girazi indasitiri nevatengi, kupa vatengi nemutengo-unoshanda mhinduro, uye kuwana kuhwina-kuhwina kubatana nevatengi.
Zvinyorwa zvekufambisa zvegirazi reSamrt
RFQ: Marapirwo uye yakasarudzika U mbiri girazi
Maitiro ekuisa U girazi-remukati chikamu
U chimiro girazi dhizaini dhizaini
© Copyright - 2010-2020: Yongyu Glass All Rights Reserved.